Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic ne-Deagglomeration - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukusabalalisa nokusabalalisa kokuqina kwezidakamizwa kuyisicelo esibalulekile samadivayisi ultrasonic. I-cavitation ye-Ultrasonic ikhiqiza i-shear ephezulu ephula izinhlayiyana zezinhlayiya zibe yizinhlayiyana ezihlakazekile.
Ukuxuba ama-powders abe ngamanzi isinyathelo esivamile ekubunjweni kwemikhiqizo ehlukahlukene, njengopende, Inkinobho, impofu, iziphuzo, noma imidiya yokuphosa. Izinhlayiya zomuntu ngamunye zihlangene ngokukhanga kwemvelo ehlukahlukene yemvelo kanye namakhemikhali, kuhlanganise namandla e-van der Waals nokuxubana kwamanzi. Lo mphumela unamandla kakhulu oketshezi oluphezulu lwe-viscosity, njenge-polymers noma ama-resins. Amandla okukhanga kufanele anqotshwe ukuze aguquke futhi ahlakaze izinhlayiya zibe yizindaba ezimanzi.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic ku-Liquid
Ukusetshenziswa kokucindezeleka komshini kwenza ama-particle agglomerates ahlukane. Futhi, uketshezi lucindezelwe phakathi kwezinhlayiyana. Ubuchwepheshe obuhlukile buvame ukusetshenziselwa ukuhlakazeka kwama-powders abe ngamanzi. Lokhu kufaka phakathi i-homogenizers ephakeme, i-aggitator bead mills, ukufaka ama-jet mills kanye ne-rotor-stator-mixers.
Ukuphakama okukhulu kwe-ultrasonication kuyindlela ekhangayo kulabu buchwepheshe. Lapho uketsheziza uketshezi amavaysi omsindo asakaze emithonjeni yemithombo yomswakama kubangela ukushintsha ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) kanye nemigqa ephansi yokucindezela (ukungavamile). Lokhu kusebenza ngokucindezeleka komshini ekuthandeni amabutho e-electrostatic (isib. Amabutho e-van der Waals). cavitation ultrasonic eziketshezi zidala ukuqhuma okukhulu kwejetshi yamanzi okufika ku-1000km / h (cishe 600mph). Ama-jets anjalo agxilisa amanzi ngokucindezela okukhulu phakathi kwezinhlayiyana futhi uwahlukanise nomunye nomunye. Izinhlayiya ezincane ziyasheshisa nge-jet zetshezi futhi ziqhuma ngesivinini esiphezulu. Lokhu kwenza i-ultrasound an izindlela eziphumelelayo zokuhlakazeka kanye ne-deagglomeration kodwa futhi ukugaya nokugaya okuhle we-micron-size futhi ubuncane be-micron izinhlayiya.
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweCarbon Nanotubes: I-Hielscher ultrasonicator UP400S (400W) isabalalisa bese isabalalisa ama-CNTs ngokushesha nangendlela efanele kuma-nanotubes angashadile.
Ukusakazwa kweCarbon Nanotubes eManzini kusetshenziswa i-UP400S
Ukuhlakaza nokuDegagomeration kunoma yisiphi isikali
I-Hielscher inikeza amadivaysi e-ultrasonic we-dispersing and deaggomerom of noma yiliphi ivolumu ngoba batch noma inline ukucubungula. Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory isetshenziselwa amanani amaningi kusuka ku-1.5mL kuya ku-approx. 2L. Amadivayisi we-Industrial Ultrasonic zisetshenziselwa ukuthuthukiswa kwenqubo nokukhiqizwa kwamatch kusuka ku-0.5 kuya ku-2000L noma ukugeleza kwamazinga ukusuka ku-0.1L kuya ku-20m³ ngehora.
Etafuleni elingezansi, uzothola izincomo zedivayisi jikelele ngokuya ngevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza okufanele lisetshenziswe. Chofoza kuhlobo lwedivayisi ukuthola ulwazi oluthe xaxa kudivayisi ngayinye.
Kulula ukulinganisa phezulu
Ehlukile kwamanye ubuchwepheshe obuhlakazekayo, i-ultrasonication ingaba senziwe kalula kusukela ebhodini kuya ekukhiqizeni usayizi. Ukuhlolwa kwelabhuthi kuzovumela ukukhetha usayizi wezinto ezidingekayo ngokunembile. Uma isetshenziswe ekugcineni, i imiphumela yenkambiso ifana kumiphumela yebhu.
I-Robust and Easy to Clean
Amandla we-ultrasonic adluliselwa ku-liquid yi- i-sonotrode. Lena yingxenye evamile yokulinganisa, ehlanganisiwe kusuka ku-Titanium eqinile. Lona futhi kuphela okuhambayo / okudumayo okumanzi okuyingxenye. Yingxenye kuphela, okumele igqoke futhi ingashintshwa kalula phakathi namaminithi. Amaplangipi okugcoba-oscillation avumela ukufaka i-sonotrode zibe izitshalo ezivulekile noma ezivaliwe ezicindezelayo noma amaseli okugeleza kunoma yikuphi ukuma. Awekho okudingekayo okudingekayo. Zonke ezinye izingxenye ezinamanzi ngokuvamile zenziwe ngensimbi engagqwali. Ama-reactor cell asegeleza ane geometri elula futhi angakwazi kalula kalula futhi usuliwe. Awekho ama-orifice amancane noma amacembe abufihliwe.
I-Ultrasonic Cleaner endaweni
I-Ultrasound iyaziwa ngokusebenza kwayo yokuhlanza, indawo enjalo, ukuhlanza ingxenye. Umthamo we-ultrasonic osetshenziselwa ukuhlakazeka kwezicelo ukhulu kakhulu kunokuba kuhlanzwe ukuhlanzwa kwe-ultrasonic. Uma kuziwa ekuhlanjululeni izingxenye ezimanzi zedivayisi ye-ultrasonic, amandla e-ultrasonic angasetshenziswa basize ukuhlanza ngesikhathi sokuhlanza nokuhlanza, njenge-ultrasonic cavitation ususa izinhlayiya kanye nezinsalela zamanzi ezivela ku-sonotrode nasezindongeni ze-flow cell.
Cela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusabalalisa kwe-ultrasonic!
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokuhlakazeka nge-ultrasonication. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.
I-Ultrasonic Deagglomeration ye-Nanomaterials